Pakistan: Nisy baomba nipoaka sady nahafaty tany Peshawar · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Desambra 2008 8:49 GMT
Peshawar, renivohitry ny faritany avaratra andrefan'ny sisintany any Pakistan no tratran'ny fipoahana baomba mahery vaika androany [zoma]. Nitoby teo akaikin'ny trano fivoriana ilay fiara izay miaty fitaovana mora mipoaka 30-40 KG. Tsy fanafihana famonoantena ity satria tsy nisy olona tao anatin'ny fiara. Araka ny tatitra farany nataon'ny Polisy dia voamarina fa 21 no isan'ny maty ary mihoatra ny 90 no naratra.
Nanoratra i Ayesha fa “Nandriaka ny ra tao Peshawar”:
Lahatsary manaja ampiasain'ny mpampiasa YouTube Kabirrind
Nalaindaina ihany ny mpamaham-bolongana Pakistaney hiresaka ny momba ity vaovao ity noho ny mahafaran'ny herinandro, ny Hajj (fivahiniana masina) ary ny fetinn'ny Eid ul Adha. Fa nisy kosa ny nazoto nampita ny vaovao tamin'ny alalan'ny Twitter. Ho amin'ny vaovao farany momba ity voina ity dia azonao arahina ao amin'ny Twitter eto izany na amin'ny Twitter-ko manokana eto. Azonao jerena ihany koa ny fantim-baovaon'ny haino aman-jery ato amin'ny bolongako Guppu.com.
28 Mey 2020Azia Atsimo
08 Mey 2020Azia Atsimo
eny tompoko, misaotra anareo nanome ny vaovao mikasika ny fiainam-pirenena manerana izao tontolo izao. tena tsy mety milamina ihany izy ity kanefa na dia miezaka aza ny ampahany amin’ny vondrona iraisam-pirenena dia maha-kely finoana ny hampisy filaminana sy fandriam-pahalemana eto ambonin’ny tany. Ny hafatro dia izao hoe; mba andefaso vaovao ihany ny tenako rehefa misy ny vaovao manaraka mba handinihana izao fandehan’ny fiainana izao.
07 Janoary 2009, 10:09
Aza manahy ianao fa ezaka ataonay mihitsy ny manome vaovao ny rehetra. Raha mahay teny anglisy moa ianao dia avy any amin’ny global voices online avokoa ny lahatsoratra nadikanay. Raha tsy izany dia afaka manaraka azy eto ihany ianao.
10 Janoary 2009, 08:53
Hiresaka koa -> ylan
Vakio amin'ny teny Português, 繁體中文, 简体中文, Français, Italiano, English